« Talents campus Durban » : anisan’ireo notsongaina i Mandimby Maharo | NewsMada
« Talents campus Durban » : anisan’ireo notsongaina i Mandimby Maharo
Par Taratra sur 19/05/2018
Iray amin’ireo mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny sarimihetsika sy ny kolontsaina voafidy hiatrika ny « Talents campus », any Durban, Razafimanantsoa Mandimbijaona Maharo na i Mandimby Maharo. Tanterahina ny 20 hatramin’ny 24 jolay izao ity hetsika goavana, atsy Afrika Atsimo, ity.
Tafiditra ao anatin’ny « Festival » iraisam-pirenena miompana amin’ny sarimihetsika, efa fanao any Durban, hatramin’ny taona 1979, ny « Talents campus ». Fotoana iray hamondronana ireo mpisehatra eo amin’ity tontolo ity io : mpanoratra na « scénariste », mpanatontosa horonantsary « fiction » sy fanadihadiana ary mpanao tsikera manokana mikasika ny horonantsary.
Sehatra iray hihaonana amin’ny matihanina ny « Talents campus » ka maromaro ireo hetsika ahazoan’izy ireo mampita ny traikefany sy ny fahaizany amin’ireo voafidy. Misy ny atrikasa sy famoronana tambajotra ka tanjona ny hivelaran’ireto tanora ireto bebe kokoa amin’ny sehatra misy azy.
Tamin’ity andiany ity, miisa 19 ireo notsongaina manokana ka avy amin’ny firenena afrikanina 13 izy ireo. Fantatra fa maherin’ny 250 ireo nisoratra anarana tamin’izany, saingy voafetra ihany ny isa raisina. Anisan’ireo mendrika ity tovolahy malagasy, mpitantana ny Culture261, izay « site internet» mpivoy ny tontolon’ny zavakanto, ity.
Mikasika ny « Festival international du film » any Durban kosa, efa andiany faha-39 ny amin’io volana jolay io. Izany hoe, izy no « festival » miompana tanteraka amin’ny tontolon’ny sarimihetsika; faharoa, efa ela indrindra aty Afrika, aorian’ny « Fespaco ».